९ सय मेगाहर्जमा थ्रीजीको पनि अनुमति - ICT Frame Technology
९ सय मेगाहर्जमा थ्रीजीको पनि अनुमति
जेठ १८ बाट फोरजी चलाउन एनसेललाई अनुमति
२२ वैशाख, काठमाडौं । अब एनसेलले पनि चौंथो पुस्ताको दूरसञ्चार सेवा फोरजी सेवा प्रारम्भ गर्ने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेलललाई फोरजी सञ्चालनको अनुमति दिएको छ ।
आगामी जुन १ अर्थात जेठ १८ गतेदेखि फोरजी चलाउन सक्ने गरी एनसेललाई फोरजी अनुमति दिइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले एनसेलले फोरजीका लागि पेश गरेको रोलआउट प्लानलाई स्वीकृत गर्दै फोरजी सञ्चालनको बाटो खुला गरिदिएको छ ।
उसले फोरजीका लागि आन्तरिक तयारीसमेत गरिरहेको छ । एनसेलसँग १ हजार ८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा ११ मेगाहर्ज फि्रक्वेन्सी छ । यसैलाई उपयोग गरेर अब एनसेलले फोरजी चलाउन सक्ने प्रवक्ता अर्यालले बताए । फोरजीका लागि थप फि्रक्वेन्सी भने नदिइएको अर्यालले बताए ।अब एनसेलले तत्कालै फोरजीको परीक्षण गर्न गर्न सक्नेछ । एनसेलले प्राधिकरणसमक्ष अनुमति पाएको एक महिनाभित्र फोरजी चलाउने गरी योजना प्रस्तुत गरेको थियो ।
फोरजीका लागि निवेदन दिएको स्मार्ट टेलिकमले भने अनुमति पाएको छैन । नेपाल टेलिकमले यसअघि नै फोरजी सेवा सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ ।
हालै संशोधन गरिएको दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी) नीतिले पुरानै ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीमा नयाँ सेवा सुरु गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ ।
सोही व्यवस्थाअनुसार एनसेलले प्रविधिगत तटस्थता (टेक्नोलोजी न्युट्रल) गरी पहिले नै पाएको १ हजार ८ सय मेगाहर्ज ब्यान्ड फ्रिक्वेन्सीमा फोरजी चलाउन अनुमति पाएको हो । नेपाल टेलिकमले पनि टेक्नोलोजी न्युट्रालिटीमा फोरजी लाइसेन्स पाएको थियो ।
प्राधिकरणले एनसेललाई ९ सय मेगाहर्ज ब्याण्डमा थ्रीजी विस्तारको अनुमति पनि पाएको छ । अब एनसेलले प्राधिकरणले ल्याएको नयाँ ब्रोड ब्याण्ड नीतिअनुरुप गाउँ-गाउँसम्म उच्चगतिको इन्टरनेटका लागि ९ सय मेगाहर्ज ब्याण्डमा थ्रीजी सेवा विस्तार गर्न सक्ने प्रवक्ता अर्यालले बताए ।
एनसेलले यसमार्फत ६० प्रतिशत जनताका ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुर्‍याउने गरी प्रस्ताव पेश गरेको थियो । अबको १२ महिनाभित्रै ६० प्रतिशत नागरिकलाई उच्च गतिको इन्टरनेट दिने गरी एनसेलले गरेको प्रस्तावलाई ध्यानमा राख्दै ९ सय मेगाहर्ज ब्याण्डलाई पनि टेक्नोलोजी न्युट्रालिटीको स्वीकृति दिइएको हो । एनसेलसँग ९ सय मेगाहर्जमा ८ मेगाहर्जको फ्रीक्वेन्सी छ ।
के हो फोरजी ?
फोरजी भनेको ‘फोर्थ जेनेरेसन वायरलेस’ अर्थात चौथो पुस्ताको ताररहितको इन्टरनेट डाटा प्रविधि जुन मोबाइल इन्टरनेट प्रबिधिमा सवैभन्दा पछिल्लो प्रबिधि हो ।
पछिल्लो प्रबिधि भएको हुनाले स्वभाविकरुपमा फोरजी थ्रीजीभन्दा तिब्र गतिको हुन्छ । आइटियूको मापदण्ड अनुसार १ सय मेगाबिट्स प्रति सेकेन्ड (एमबीपीएस) गतिको इन्टरनेट सहितको सेवालाई फोरजी भनिन्छ ।
बिभिन्न देशमा टेलिकम कम्हपनीरुले १ सय एमबीभन्दा कम क्षमतामै फोरजी सेवाका रुपमा चलाइरहेका छन् । नेपाल टेलिकमले भने ३०एमबीपीएसमा फोरजी चलाइरहेको छ ।
फोरजी सेवामा मोबाइल वेब एक्सेस, आइपि टेलिफोनी, गेमिङ सर्भिस, हाइ डेफिनेसन मोबाइल टिभी, भिडियो कन्फेरेन्सिङ, थ्रीडी टेलिभिजन र क्लाउड कम्प्युटिङ पनि पर्दछन् ।
Previous Post Previous post: गुगलको निःशुल्क वाइफाइ
Next Post Next post: दलहरूमा सामाजिक सञ्जालमा: यस्ता छन् ‘रमाइला नाराहरु
Oxford College लाई पछिल्लो ६ शैक्षिक सत्रमा ४ वटा स्वर्ण पदक
surencool4 May 1, 2016 May 1, 2016
हरेक महिना १ जीबी एनसेलको डेटा १० महिनासम्म निःशुल्क
Repoter Chiranjibi Adhikari June 23, 2017 June 23, 2017 0
अब काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र रसुवामा निःशुल्क फास्ट इन्टरनेट !
Repoter Chiranjibi Adhikari May 4, 2017 0
बिद्यालयस्तरीय बृहत जनचेतनामुलक कार्यक्रम सम्पन्न
Repoter Chiranjibi Adhikari November 16, 2017 0
साईबर सुरक्ष सम्बन्धमा अनलाईनखवर डटकमको ध्यानकर्षण
surencool4 November 29, 2017 0